Akwa Beryllium ọla kọpa Alloy
Beryllium ọla kọpa Alloy Waya
Alloy nke Beryllium dị ala
Mgbasa Al2O3 kwusiri ike Alloy
Mkpanaka na Waya
Ọla kọpa Ferro Alloy
Gịnị bụ ọla kọpa beryllium?
Ọla kọlọ Beryllium bụ ọla kọpa nke ihe dị mkpa alloy bụ beryllium, nke a makwaara dị ka ọla nke beryllium. Ọla kọpa nke Beryllium bụ ihe kachasị mma na-agbanwe agbanwe na ọla kọpa, yana ike dị elu, ịdọ aka ike, ike ike, ike ọgwụgwụ, mgbachi elastic, nkwụghachi nke corrosion, na-eyi re ...
Ihe ndị bụ isi na ndụ nke ọla kọpa beryllium
Ejiri ọla kọpa nke Beryllium bụ ihe eji emepụta ụrọ maka ịme ụmụaka na ihe egwuregwu ụmụaka. Isi ihe nke ihe eji eme ọla kọpa beryllium: 1. Kpoo ihe atụ dị ka ajị anụ, akara akpụkpọ anụ, ọka osisi, osisi anụmanụ ọnụ ọgụgụ, wdg, kwesịrị ntụkwasị obi kpam kpam na ihe mbụ ma nwee ike ịrụzi ma kwụọ mmebi mbụ ahụ iji t ...
Ngwurugwu, Ogwe na ọkpọ nke ọla kọpa beryllium
1. A na-enye mkpanaka n’ahịrị dị larịị ka onye ahịa hazie ya ma ọ bụ nwee ya ka ọ bụrụ akụkụ ikpeazụ. A na-akpụ akpụ tupu ịkpa ike. Nhazi sistemụ na-abụkarị mgbe a gbasiri ike. Ojiji ndị a gụnyere: ar Ihe ndị ọzọ chọrọ mma na ndị nwere obere aka na-achọ obere mmezi ▪ Ihe ndị na-agbanwe agbanwe ...
No.18 Xingye South Road, Taicang Economic Development Mpaghara, China
Ngwaọrụ Igwe Ọdụdọ